အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင် တခြားနိုင်ငံတွေက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံဖို့ ကြိုးစားလာတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံပေါ် နှစ်ပေါင်းများစွာ စိန်ခေါ်သူမရှိ သြဇာလွှမ်းမိုးလာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကို ခြိမ်းခြောက်ရာရောက်နေတယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ရှုမြင်ကြပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားနဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်းတို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အဆောက်အဦးတွင် တွေ့ဆုံစဉ်
အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ တရုတ်နိုင်ငံပေါ် နှစ်ရှည်လများ အားကိုးအားထား လုပ်ခဲ့ရတာတွေကို ပြောင်းလဲပစ်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် တက်လှမ်းနေပြီလို့ ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်က မြန်မာ့ရေးရာ ပညာရှင် Renaund Egreteau က ပြောပါတယ်။
နောက်ပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ခေတ်ပြိုင်နိုင်ငံတကာရေးရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး Yuan Peng ကလည်း လက်ဝါးကြီးအုပ် ချုပ်ကိုင်တဲ့ခေတ် ကုန်ဆုံးသွားပြီဆိုတာ ရှင်းပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးတာကတော့ ကျန်နေအုံးမှာပါပဲလို့ သူကပြောပါတယ်။ အမေရိကန်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံထွန်းသစ်လာတာကို အရှိန်နှေးသွားအောင် ဒါမှမဟုတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် စစ်ရေးမဟုတ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ သုံးပါလိမ့်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဘေဂျင်းမြို့တက္ကသိုလ်တခုက နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးရာပညာရှင် ပါမောက္ခ Chen Qi က လည်း တရုတ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နက်ရှိုင်းလှတဲ့ဆက်ဆံရေးက ညတွင်းချင်း ပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာရဲ့ ထောက်ခံမှုရလာရင် နဂိုဆက်ဆံရေး မပျက်ယွင်းစေဖို့ တရုတ်နိုင်ငံဟာ သံတမန်ရေးမှာ ဒီထက် ကျွမ်းကျင်ဖို့လိုလာမယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ယေးတက္ကသိုလ်က သုတေသီ Josh Gordon က အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေနဲ့ ဆက်ဆံဖို့ အကြီးအကျယ် ရှောင်လွှဲခဲ့ချိန်မှာ တရုတ်နိုင်ငံဟာ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ ထူးထူးကဲကဲ ဆက်ဆံနိုင်တာကို အားရကျေနပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အခုတော့ တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ နိုင်ငံမှာ ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ သူတို့နည်းသူတို့ဟန်ကို ပြန်စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့ တွန်းပို့တဲ့ အခြေအနေဆိုက်ရောက်နေပြီလို့လည်း ရှုမြင်ပါတယ်။
မြန်မာ့လယ်သမားတွေ ဘ၀ မြှင့်တင်ရေး အမေရိကန်ထံ အကူအညီတောင်းခံ
မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေအပေါ် ဗီဇာပိတ်ပင်မှု အမေရိကန် ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီ
ကင်တားနားရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်း အစိုးရ တုံ့ပြန်
မြန်မာအစိုးရ နိုဘယ်ဆု ရနိုင်တယ်လို့ ဖင်လန် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းပြော
အစိုးရစီမံကိန်းများကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိ လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ တိုက်တွန်း
သတင်းထောက်တွေရဲ့ Gmail ဖောက်ဖို့ ကြိုးစားမှုနဲ့ မပတ်သက်ကြောင်း အစိုးရ ငြင်းဆို
အခြေခံဥပဒေ ခုံရုံးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ သမ္မတထံ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သဝဏ်လွှာပေးပို့
စစ်တပ်ချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး မြန်မာရောက်ရှိ
Old Saint Paul Students
ရခိုင် သမိုင်းပညာရှင်တွေရော ဗမာသမိုင်းပညာရှင်တွေကပါ တခြားကိစ္စမှာ သဘောကွဲလွဲကောင်း ကွဲလွဲနိုင်ပေမယ့် ရိုဟင်ဂျာဟာ ငါတို့ တိုင်းရင်းသား လုံးဝ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အချက်မှာတော့ အားလုံး သဘောတူပြီးသား ဆိုတာကိုပဲ ပြောချင်တယ်။ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တွေမှာ တခြားဘာသာဝင်တွေပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေကို တရားသဖြင့်ပေ ဖြစ်ဖြစ် မတရားသဖြင့်ပေး ဖြစ်ဖြစ် သိမ်းယူနိုင်ရင် ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုပါလား။ကြောက်စရာပေ။
Obama biased favour of rohingya
သို့ပေမယ့် အပြစ်မဲ့သူများကို အကြမ်းဖက်မှုအတွက် ဘာဆင်ခြေမှ ပေးလို့မရပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာတွေလည်း ခင်ဗျားတို့လို၊ ကျနော့်လို သူတို့မှာလည်း သူတို့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ သူတို့ရှိပါတယ်။ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် အချိန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်တို့ အားလုံးရဲ့ လူသားဖြစ်တည်မှုအတွက် ဒီနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်အတွက် ရည်မှန်းပြီး သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ရပ်တန်းကရပ်ဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ” ဟု ထည့်သွင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းက အင်မတန်မှ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ပြည်ထောင်စု့မြန်မာ အစိုးရအနေနဲ့ရော၊ ရှေ့က အစိုးရ အဆက်ဆက်အနေနဲ့ကတော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကိုသော် လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့ အချက်ကိုသော် လည်းကောင်း လက်ခံထားခြင်း မရှိပါဘူး။
Nov 27, 2012 06:42 AM
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား (President Obama) က ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရိုဟင်ဂျာများကို နိုင်ငံသားတဦးကဲ့သို့ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးများ ပေးအပ်သင့်သည် ဆိုသော ပြောဆိုမှုနှင့် ဆက်စပ်ပြီး ရိုဟင်ဂျာ (Rohingya) ဆိုသော အသုံးအနှုန်းကို လက်မခံပါ။ Rohingyas' REAL NAME IS Bengali and they are illegal migrants from bangladesh, not an ethnic of Burma. Obama, you should respect Burma citizenship law 1982.
Nov 27, 2012 06:41 AM